Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Garsoorka JFS mudane Avv. Xasan Xuseen Xaaji oo ku sugan magaalada Baydhabo oo uu wehliyo Taliye kuxigeenka Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa kormeer ku tagay Xabsiga weyn ee Baydhabo oo dhawaan xariga laga jaray, si ay maxaabiistu u helaan Xabsi ay u dhameystiranyihiin adeegyadiisa, loona ilaaliyo xuquuqda Maxaabiista.
Waxaa wafdiga wasiirka Baydhabo kusoo dhaweeyey masuuliyiinta Wasaaradda Cadaaladda KGS iyo Taliyaha Ciidanka Asluubta Dowlad-goboleedka KGS , waxayna warbixin dhameystiran kasiiyeen baahiyaha, caqabadaha iyo adeegyada kale ee lagama-maarmaanka ah ee Xabsiga.
Xabsigan, oo si casri ah loo dhisay, lehna halbeegga xuquuqda aadanaha, kuna filan tiro badan oo maxaabiis ah, ayaa wuxuu qeyb weyn ka qaadan doonaa badqabka xaaladaada caafimaad ee maxaabiista, xirfadeynta, dhaqancelinta, waxbarashada aasaasiga ah ee maxaabiista iyo yareynta falalka dambi ee ka dhaca gaar ahaan deegaanada KGS guud ahaa Dalka Soomaaliya.
Wasiirku, wuxuu mahad celin ballaaran usoo jeediyey wafdigii halkaasi kusoo dhaweeyey ee ay ugu horeeyaan masuuliyiinta Wasaaradda Cadaaladda KGS iyo Taliska CAS.